ဟာဗာဆစ်အချိန်ဇယား၊ ရာသီဥတုစခန်းများနှင့်ရာသီဥတုစျေးနှုန်းများ - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Havaist တောင်တက်နာရီ Havaist စခန်းများနှင့် Havaist စျေးစီမံကိန်းများကို
21 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Havaist တောင်တက်နာရီ Havaist စခန်းများနှင့် Havaist စျေးအချိန်ဇယားများ။ 15 ။ အစ္စတန်ဘူလ်၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများHAVAİST Inc ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏လုပ်ငန်းခွဲခြင်း, အချို့သောအချက်များစေရန်လေဆိပ်-လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ညှနျကွားထဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖျော်ဖြေရေကြောင်းခရီးရှည်များအတွက်တစ်နေ့လျှင်စင်တာများ 197နာရီကနေ 24, ခရီးသည်လွန်ခဲ့တဲ့ 15 မိနစ်ရပ်တန့်ဖို့အကြံပေးလျက်ရှိသည်
အပြည့်အဝစွမ်းရည်မြို့လယ်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်အကြားန်ဆောင်မှုများပေးရန်နှင့် Gayrettepe-လေဆိပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးစတင်ခဲ့ Halkalı-Airport မြေအောက်ရထားလိုင်းများ၏လုပျငနျးနေဆဲဖြစ်သည်။ Gayrettepe-အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်နောက်နှစ်ဦးစားပေးအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါတက္ကစီ မှလွဲ. လေဆိပ်ကိုလာလိုသူခရီးသည်များအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦ။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, İETT H1, H2, H3, H4 ဘတ်စ်ကားများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကားစစ်ဆင်ရေး၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏လက်အောက်ခံ S Havaist ဘတ်စ်ကားနှင့်အတူအမှုကိုပြုနေကြသည်။ ဒါ့အပြင်ဧပြီလကနေ 15 Corlu လေဆိပ်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်ခရီးသွားနှင့် Tekirdag အတွက်အချင်းချင်းစည်းမျဉ်းအချိန်စတင်ခဲ့သည်။
İETT H1 Mahmutbey Metro H2 Mecidiyekoy, H3 Halkalı နှင့် H-4 ခရီးသည် Ataturk လေဆိပ်ဘတ်စ်ကားနှစ်ဆလက်မှတ်ကနေသွားလာနိုင်ပါတယ်။
ဗဟို 19, 51 intermediate STOPS
Havaist လေ့လာရေးခရီးသွားသည့် 19 51 150 ကွဲပြားခြားနားသောစင်တာများနှင့်ဇိမ်ခံဘတ်စ်ကားကနေအလယ်အလတ်မှတ်တိုင်များအောင်ခရီးသည်များ၏ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်အတူလေဆိပ်ရန်လွယ်ကူ access ကိုပေးဖွင့်လှစ်။ ဘတ်စ်ကားငွေပေးချေမှုသာ '' istanbulkart 'နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်အတွက်724 နာရီရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်။
2018 46 လူတွေကိုရန်အသုံးပြုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်ဒယ်များအတွက်ခရီးသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူHAVAİSTအရည်အသွေးကိုဝန်ဆောင်မှုမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ခရီးသည်များ euroxnumx ။ ခရီးသည်နှစ်သိမ့်အတွက်ပြန်ဆိုနှင့်အခြေခံပေါ်မှာဒီဇိုင်းရေးဆွဲ havaist န်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတစ်ဦးအဆင်ပြေခရီးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ် လုပ်. , ထိုင်ခုံ, ချိန်ညှိ headrests အကြားကြီးမားသောအကွာအဝေးတစ်ခုမြင့်မားတဲ့အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေါ်မှာ TV ကို-ရုပ်ရှင်-series အရည်အသွေးမြင့်ဖုန်းမျက်နှာပြင်နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာထုတ်ကုန်6နှင့်။ USB မှတ်-powered ကို Wi-Fi ကိုဝန်ဆောင်မှုသာယာသောပြည်နယ်ယူမယ့်စီးပေးခြင်းရည်ရွယ်နေသည်အတူယူနစ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားသွင်း။
တစ်ဦးတည်းပျဉ်ပြားနှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့HAVAİST LINE ရရှိနိုင် istanbulkart
Ido Yenikapi-Bakirkoy အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်-LINE (stats-1)
NEW -Tepeüstü- istanbulhavalim Kozyatağıမီထရိုလိုင်း (stats-7)
Taksim Abdülhakhamitလမ်း-Beşiktaş- istanbulhavalim NEW LINE (stats-19)
Peron ရဲ့ Besiktas IETT
15ဇူလိုင်လဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Terminal နှင့် - မိုဘိုင်းOtogarı-Alibeyköyအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် LINE (İST- 3)
ဒီမိုကရေစီိံငြ်ဇူလိုင်လ 15 Esenler ဘတ်စ်ကားဘူတာ
ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက် operating3တက္ကစီအပါအဝင်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် "အီး" အပြာ "D:" နှင့်လိမ္မော်ရောင် "ကို C" ရှိုးမှာအနက်ရောင်။ ခရီးသည်များ၏ဆိုက်ရောက်၏သီးခြားစီစီစဉ်ထားအစိတ်အပိုင်းများအတွင်းမှနှင့်ပြင်ပခရီးသည်အဓိကဘူတာရုံမှာအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားအစိုင်အခဲအသွားအပြန်ကြိမ်နှင့်အတူတပ်ဖြန့်မော်တော်ယာဉ်များမှအကြိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်, Arnavutkoy နှုန်းနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေနှင့်အတူ 39 52 ကနေခရိုင်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အခြေခံပြီးသောအချိန်ဇယားအတိုင်း, အမြင့်ဆုံးအခကြေးငွေ 272 နှုန်း Sile နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်တက္ကစီကိုပုံမှန်အတိုင်းတက္ကစီသမားတွေကြောင်းဒေသခံကုန်သည်ကြီးများအသင်းကြေညာခဲ့သည်ပြီ
Arnavutkoy 52 TL မုဆိုး 130 TL Bagcilar 98 TL Bahçelievler 135 TL Bakirkoy 147 TL Başakşehir 110 TL, Bayrampaşa 117 TL Besiktas 145 TL Beylikdüzü 154,00 TL Beyoğlu 145 TL Büyükçekmece 157 TL Catalca 115 TL Esenler 97 TL Flat 155 Gungoren 60 TL Kağıthane 127 TL Küçükçekmece 120 TL, Sarıyer 130 TL Silivri 92 TL Sultangazi 137 TL Sisli 112 နှုန်း, Zeytinburnu 227 TL, နှုန်း TL Eyüp 97 TL Fatih 147 TL Eyup 130 ။
flat 150 TL Beykoz 138 TL Çekmeköy 188 TL Kadikoy 168 TL, Kartal 252 TL Maltepe 217 TL Pendik 247 TL Sancaktepe 195 TL Sultanbeyli 195 TL, Tuzla 272 TL Umraniye 225 TL Uskudar 145 နှုန်းချီလီ 160 TL ။ (+ Bridges နှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး)
İST6ALİBEYKÖY MOBILE OTOGARI-အစ္စတန်ဘူလ် AIRPORT: 31 ကီလိုမီတာ 45 နှုန်း, 16 မိနစ်။
İST11 ARNAVUTKÖY-AIRPORT: 20 နှုန်း 35 ကီလိုမီတာ။ , 12 မိနစ်
İST17 AVCILAR-HALKALI-ဒါဟာခရိုင်င်များသော: 40 ကီလိုမီတာ 100 နှုန်း, 16 မိနစ်။ ။
İST15BAHÇEŞEHİR-လေဆိပ်: 42 နှုန်း 100 ကီလိုမီတာ။ , 16 မိနစ်
İST4BAKIRKÖY Ido-လေဆိပ်: 44 နှုန်း 80 ကီလိုမီတာ။ , 18 မိနစ်
İST14BAŞAKŞEHİR-AIRPORT: 27 ကီလိုမီတာ 40 နှုန်း, 14 မိနစ်။ ။
İST5BEŞİKTAŞ-AIRPORT: 43 ကီလိုမီတာ 90 နှုန်း, 18 မိနစ်။ ။
İST3 ESENLER OTOGAR-လေဆိပ်: 39 ကီလိုမီတာ။ 75 နှုန်း, 16 မိနစ်။
İST7KADIKÖY-လေဆိပ်: 64 ကီလိုမီတာ။ 110 နှုန်း, 25 မိနစ်။
İST12 KEMERBURGAZ-AIRPORT: 21 နှုန်းကီလိုမီတာ 30, 12 မိနစ်
İST16 MAHMUTBEY Metro-AIRPORT: 36 ကီလိုမီတာ 75 နှုန်း, 15 မိနစ်။
İST18 MECIDIYEKOY-ရဲ့ခရိုင်များသော: 37 ကီလိုမီတာ။ 60 နှုန်း, 16 မိနစ်။
İST8PENDİK-လေဆိပ်: 97 နှုန်း 100 ကီလိုမီတာ။ , 30 မိနစ်
İST10 SANCAKTEPETEPEÜSTÜ-AIRPORT: 64 ကီလိုမီတာ။ 120 နှုန်း, 25 မိနစ်။
İST13 Saunders-Hacıosman LINE : 40 ကီလိုမီတာ, 75 မိနစ် 16TL ။
İST1S Sultanahmet-EMİNÖNÜဟင်းလင်းဖြစ်သော: 52 ကီလိုမီတာ 100 နှုန်း, 18 မိနစ်။
İST19 Taksim- AIRPORT: 40 နှုန်း 80 ကီလိုမီတာ။ , 18 မိနစ်
İST2 TUYAP-AIRPORT: 58 ကီလိုမီတာ 100 နှုန်း, 21 မိနစ်။
İST1YYENİKAPI-AIRPORT: 48 ကီလိုမီတာ 110 နှုန်း, 18 မိနစ်။
H1 MAHMUTBEY Metro-အစ္စတန်ဘူလ် AIRPORT: Mahmutbey မီထရို - Karacaoğlanမူလတန်းကျောင်း - Inonu Caddesi - Halkalı လမ်း - Piri Reis - ဇူလိုင်လ 15 Mah ။ - စက်မှုခရိုင် - Ikitelli တံတား - အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်။
H2 MECIDIYEKOY-အစ္စတန်ဘူလ် AIRPORT: Mecidiyekoy Metrobus - Cagle လမ်းမကြီး - Nurtepe Viaduct - Hasdal - ခါးပတ်လမ်း - သစ်တောလမ်း - Coastal အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်။ အဆိုပါယာဉ်ကြောအခွအေနေအရက 30-40 မိနစ်ထွက်ယူသွားတတ်၏။
H3 လက်စွပ် - အစ္စတန်ဘူလ် AIRPORT: အကောက်ခွန် - Halkalı ဘူတာ - Gültepe - ရေကန်အိမ်များ - TOKI အားဖြင့် Bezirganbah - ဘူတာ Mah ။ Muhr ။ - Sakarya လမ်း - အမ် Akif Ersoy ဆေးရုံ - ဥရောပအိမ်ရာ3- Halkalı ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် - Halkalı ပန်းခြံ - Big လီလမ်း - Güneşparkအိမ်များ - Halkalı လမ်း - Ikitelli လမ်းမကြီး - Ataturk ရပ်ကွက် - Ikitelli ဂိုဒေါင် - MASKO'DA2- 1 MASKO'DA - ပန်းပဲဆရာဆိုက်ကို - အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်။
H4 Ataturk လေဆိပ် - အစ္စတန်ဘူလ် AIRPORT
အဆိုပါယာဉ်စစ်ဆေးရေးစာရင်း Check ကဘာလဲ? (2014 မျက်နှာပြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းစျေးနှုန်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်) 22 / 05 / 2014 အဆိုပါယာဉ်စစ်ဆေးရေးစစ်ဆေးမှုစာရင်းကဘာလဲ: ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းနှုန်းထားများဘယ်လောက်? သင်သည်သင်၏ကားကိုရွှေ့မီစျေးနှုန်းစစ်ဆေးရေးစစ်ဆေးရေး query နိုင်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး, ဘတ်စ်ကား, Truck ကား, ထွန်စက်နှင့် 22 ကား, မီနီဘတ်စ်နှုန်းရေနံတင်သင်္ဘောအောက်ပါအတိုင်းရက်စွဲနှင့် B.2010.KUG.11.0 / မြို့ပတ်အမှတ် 0.00.17.00-230 မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးရေးအခကြေးငွေဆုံးဖြတ်ထားကြသည်ဒီဇင်ဘာလ 16673 223,02 ထုတ်ဝေသောလမ်းမကြီးစည်းမျဉ်း၏ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန, အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဝန်ကြီးဌာန လယ်ထွန်စက်နှုန်း (နောက်တွဲယာဉ်, Römorksuz), မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် 165,20 ငွေချေမှုနှုန်းစက်တပ်စက်ဘီးအတွက်ငွေသားလက်ခံ 84,96, ထရပ်ကား, အထူးရည်ရွယ်ချက်ယာဉ်, မြေယာမော်တော်ယာဉ်များ, အမြည်းများနှင့် semi-အမြည်း။ အထက်ပါအမျိုးအစားအနေဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရလတံ့သောအတန်း, ကျန်ရှိနေသေးသောယာဉ်အပြင်ဘက်ယာဉ်များအမျိုးအစားဖော်ပြခဲ့တဲ့ ...
အဇာဘိုင်ဂျန်, ဂျော်ဂျီယာနှင့်တူရကီတို့သည်ဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်းများအတွက်အခွန်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ် 15 / 07 / 2016 အဇာဘိုင်ဂျန်, ဂျော်ဂျီယာနှင့်တူရကီတို့သည်ဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်းများအတွက်အခွန်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်: အဇာဘိုင်ဂျန်မီးရထားအာဏာပိုင် Sözcüရှားပါး Azmamedov မကြာသေးမီကဂျော်ဂျီယာနှင့်တူရကီအစီရင်ခံအဇာဘိုင်ဂျန်အဘို့ဘာကူ-Tbilisi-Kars (BTK) ရထားလမ်းအခွန်သုံးတဖက်သတ်ထင်မြင်ချက်များလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်သူကပြောပါတယ် s ။ ထိုကိစ္စအပေါ်သဘောတူညီချက်, အဇာဘိုင်ဂျန်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Javid Gurbanov နှင့်တူရကီ, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan နှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ Gurbanov, BTK သည့်ဂျော်ဂျီယာ-တူရကီနယ်စပ်အားဖြင့်ပြီးစီးပါကမကြာသေးမီကစွမ်းအင်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများပြီးစီးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ တူရကီနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်အကြားထွက်သယ်ဆောင်ဂျော်ဂျီယာအတွက် 2007 နှစ် built ဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်း, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ 840 ကီလိုမီတာဖို့ရထားလမ်းတက်၏စုစုပေါင်းအရှည် ...
တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနှင့်အခွန်စည်းကြပ် - TRENKART 18 / 09 / 2017 အစ္စတန်ဘူလ်Eskişehirနှင့်တူရကီအဖြစ်အချိန်, Eskisehir မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအကြောင်းကိုစပ်စုဖြစ်ရန်အတွက်အချိန်ကတူရကီမှသွားရောက်ကာ။ တူရကီကနေ Eskisehir မှတူရကီ, Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထား (High Speed ​​ရထား - YHT) မှဖြစ်ကောင်းအမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းရောက်ရှိရန်သင်ဤဆောငျးပါးတှငျတှေ့ရပါလိမ့်မယ်အချိန်ဇယားနှင့်စျေးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုအတူ။ န်ထမ်းများအကြားတူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားအဖြစ်ကတခြား Eskisehir သည်လည်းငါတို့ပြည်နယ်မှလာဒီမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ခရီးသည်ဝင်တိုးရပ် - အနီးအနားရှိန်ဆောင်မှုများအတိတ်ကာလများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တူရကီ Eskisehir အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနေစဉ်? အတွက်တူရကီ-Eskişehirမြန်နှုန်းမြင့်ရထား ...
ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယား Konya အတွက်ပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ! 04 / 11 / 2017 အကောက်အခွန်လိုင်းများပေးခြင်းခရီးသည်ဘတ်စ်ကား၏တနင်္လာနေ့ပြင်းထန်မှုကနေ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, နိုဝင်ဘာလ62017 က-ပြင်ဆင်ရန်ပြန်လည်ထက်ပိုမှနောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြေညာခဲ့သည်။ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ရထားစနစ်များဦးစီးဌာနဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယားကိုပြန်စီစဉ်များအတွက်အပိုဆောင်းအချိန်ပေးရန်လိုင်းကျော်တနင်္လာနေ့ခရီးသည်နံပါတ်များကနေနိုဝင်ဘာလ62017 ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့၏နယူးအချိန်ဇယားနှင့်အခွန်ဝဘ်လိပ်စာ www.atus.konya.bel.t မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ ရင်းမြစ်: www.yenikonya.com.t
Diyarbakir ကျောင်းသားန်ဆောင်မှုများကြေးဇယားထဲမှာဖော်ထုတ် 21 / 09 / 2018 Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME), 2018-2019 ကျောင်းသားဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အသုံးချလိမ့်မည်သည့်အခွန်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအတွက်အကောက်အခွန်အပြင်ဘက်ကိုဖန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူတရားစွဲဆိုမည်မဟုတ်ပါကြေညာခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME), ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ထမ်း 2018-2019 နှစ်ပေါင်းကျောင်းသားဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံအကောက်အခွန်အချိန်ဇယားကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ တက် 0-3 80 ကီလိုမီတာမှ TL, နှုန်းအဖြစ်စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်သည်အထိဝန်ထမ်း 0-20 130 များအတွက်ပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုကီလိုမီတာ။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, သင်လက်ရှိမိဘများတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲဌာနသို့မဟုတ်ခြင်းဖြင့်ပေးဆောင်သည့်အဖိုးအခများလက်ခံရရှိမှုကဆုံးဖြတ်စျေးနှုန်းကိုကြည့်ရှုပါလျှင် မှလွဲ. ပိုမိုမြင့်မားလုပ်ခတောင်းဆို ...
အဆိုပါယာဉ်စစ်ဆေးရေးစာရင်း Check ကဘာလဲ? (2014 မျက်နှာပြင်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းစျေးနှုန်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်)
တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနှင့်အခွန်စည်းကြပ် - TRENKART
ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယား Konya အတွက်ပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ!
စျေးနှုန်းစုံစမ်းရေး Michelin တုရုမြို့ရွေးလျှောက်လွှာယခုဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်း
ဗလီများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို 50 ရာခိုင်နှုန်းစျေးတိုးမြှင့်
Keçiören cable ကိုကားတစ်စီး်ဆောင်မှုများစျေးနှုန်းစီမံကိန်းများကို